Aprimo | Kushambadzira Tech Vhidhiyo
Isu tinofara kwazvo kutanga chirongwa chitsva padhuze neKushambadzira Technology Nhau uye iyo Kushambadzira Tekinoroji Radio Ratidza… Tiri kuvhurawo Marketing Technology Vhidhiyo nhevedzano!
Yakaitirwa uye inogadzirwa na 12 Nyeredzi Media, iwo akateedzana anokuzivisa iwe kumakambani anotungamira ezvekushambadzira uye nevanhu vari kumashure kwezvigadzirwa nemasevhisi! Yokutanga mune yedu nhevedzano ndeye Aprimo, yekushambadzira michina kambani ine rakagadziriswa zvishandiso zvishandiso zvevashambadzi.
Pano muIndipolis, tine makambani akati wandei akagadzirirwa mavhidhiyo. Usanetseka, zvakadaro! Kana kambani yako yekushambadzira tekinoroji isiri pakati peIndiana, isu tinowana mavhidhiyo kubva kwauri uye 12 Stars Media vanozo sanganisa vhidhiyo ivo pachavo. Ramba uchifunga, hongu, kuti iyo yekumirira rondedzero yatove yakareba uye pane zvimwe zvinodhura pakuita mavhidhiyo.
Taura nesu kana iwe uchida kuve unotevera! Kutenda kwakakosha kuna Rocky naZach kubva 12 Nyeredzi Media yebasa rakakura kudai.
Usateedzere: Ndezvipi Vatengesi Vanofanira Kuziva